Kwiesityuli unokufumana iindidi ezininzi zeemveliso ezizodwa. Kodwa awona onke amantombazana anqwenela ukuthenga iimpawu zokuthengisa. Abanye abayisebenzisi, njengokuba kubangelwa ukunyuka, abanye bayesaba iikhemikhali kwimveliso enjalo, kwaye abanye bayamethembi nje abavelisi. Kodwa wonke umntu ufuna ukubonakala epheleleyo. Ngoko ke, amanye amantombazana enza izimonyo ngokwabo ekhaya.
Abo babenza okungenani kanye bayazi ukuba akukho nto inzima ekwenzeni iimveliso ezizodwa. Akufuneki naziphi izakhono ezizodwa, okwaneleyo ukwazi imithetho embalwa elula. Kule nqaku, sasihamba kunye kunye nokwabelana ngeemfihlelo zokwenza iimveliso zonyango ekhaya.
Uncedo lwezo zimonyo zininzi. Kukhuselekile ngokupheleleyo kwilusu nangempilo, kuba iqukethe izinto ezingonakalisayo. Ukongezelela, zonke izithako ezisetyenzisiweyo zendalo, oko kuthetha ukuba luncedo ngakumbi. Enye inye yinto yokuba awudingi iindleko ezinkulu zezimali ukwenza izimonyo.
Yintoni oyifunayo ukuba ube nentombi?
Zonke izithako ozifunayo ekulungiseleleni imveliso yezonyango zifumaneka lula kwivenkile ekhethekileyo okanye ikhemisi. Masichaze nawe oko kuyimfuneko ukuba ube khona ukuvelisa izimonyo zakho.
Onke amantombazana afana nama-aromas amnandi. Ngoko ke, nayiphina imveliso yokonkcenkceshela ifanele ihombe kakuhle. Ukunika iphunga eliyimfuneko kunokwenzeka ngeoli ecocekileyo. Musa nje ukudibanisa ioli kunye neoli. Ngokungafani namafutha abalulekileyo, i-aromatic ayikho into ephazamisayo.
Ukwenza isiseko okanye izithunzi, uzakufuna i-thickener. Kungcono ukusebenzisa i-xanthan. Le nkunkuma ayisebenzisi nje kuphela kwiyeza, kodwa nakwi-cosmetology. Ukuba ufuna ukuzakhela utywala okanye i-lip balm, uya kulufuna i-wax epholileyo kunye nephunga elimnandi.
Isiseko okanye ipowder, kuya kufuneka ubeke isiseko semaminerali. Kodwa gcinani engqondweni ukuba kufuneka ukhethe ithoni eya kuba yincinane kunokuba iyimfuneko eluhlaza lolunye uhlobo. Ukuqhathaniswa okanye umgubo ongafaniyo kwisakhiwo esivela kwisitolo, uthenge iingubo zebala kunye nomama we-pearl.
Ukuba udinga idayi, khetha uqobo nje. Ukwahluka kwindlela yokufakelwa, akulimazi ulusu. Ukwenza inkqubo yokupheka ibe mnandi kwaye ayikukhathazi, uya kufumana izixhobo ezifunekayo kusengaphambili: iintonga zokuxuba kunye nezitya, ipipette, umxube omncinci, isalathisi se-acidity yezimonyo.
Iyona ndlela eqhelekileyo yenziwe yamehlo. Lungiselela ukuzithiba kweenkophe zilula. Kodwa xa ukhetha isithako esifanelekileyo kuyimfuneko ukuqwalasela ubukhulu besikhumba sakho ukuze ugweme ukucaphuka.
Ukuze ulungiselele izithunzi, thabatha ezimbini iisipuni ze-talcum, isipuni se-mother-of-pearl kunye ne-half-spoonful of fine rice powder. Hlanganisa zonke izithako ngokugqibeleleyo. Ukuba ufuna ukwenza izithunzi eziluhlaza, wongeza umxube kwi-melted little flower. Faka umveliso ogqityiweyo kwisitya seglasi.
I-Mascara iyakwazi ukulungiswa nguwe. Ukwenza oku, thabatha ioli yeentyatyambo e-pre-melted-half-teaspoon, i-wax (iyancibilika) - isiqingatha sepaspuni, i-half-half-teaspoon kunye ne-pigment emnyama-ithispoon eyodwa. Hlanganisa zonke izithako kunye nomxube omncinci. Umxube obangelwayo kufuneka ugcinwe kwisitya seglasi kunye nesimbozo esivaliweyo. Ngaphambi kokusetyenziswa, i-mascara kufuneka ihlanjululwe ngamanzi.
Ubuncwane busetyenziswa ngokupheleleyo nakwiintombazana. Kunceda ukufihla ukungapheleli kwesikhumba kunye nokwenza kube nzima. Ukongezelela, i powder ikhusela ukubonakala kobuhle ebusweni. Iindleko zefowuni zindleko ezingabizi nto kwisakhiwo sayo kukho izinto ezahlukeneyo zeekhemikhali. Ngoko ke, unokuzama ukwenza i pow pow uqobo. Ngokukodwa ukwenza kube lula. Hlanganisa ngokulinganisela okulinganayo ukuchithwa kwe-mineral yomthunzi oyifunayo nge powdery powder.
Inxaxheba ebalulekileyo yokwenza kakuhle nokusekwa. Inceda ukugubha imibimbi emancinci kunye nokungafezeki kancinci. Ukwenza oko, uya kufuna enye yepunipoon ye-cream e-baby elula, i-onepants and half-cups of powder of homemade and a drops of oil flavour. Zonke izithako zixutywe kunye nomxube omncinci kude kubekho ukufana okufanayo.
I Cosmetics yomlomo
Ngaphandle kokungasisebenzisi amantombazana ngaphambili, ukunika umlomo umthunzi oyifunayo. Namhlanje kwiivenkile unokukhetha nayiphi na imibala yomlomo. Kodwa ngaba wakha wacinga malunga nento eyenziwa yile mveliso? Iqulethe iikhemikhali ezininzi ezingakhokelela kwimilomo eyomileyo.
Ukwenza umlomo emlonyeni kulula. Ukwenza oku, thatha isipuni esisodwa sebhattile ye-shea, i-cocoa kunye nejojoba, i-vitamin E, i-half-spoonful ye-bex edibeneyo kunye ne-pigment ye-shade efunwayo. Zonke izithako zixutywe ngokuzeleyo kwaye zidibanise amaconsi athile naluphi na ioli ecocekileyo. Ubunzima obangelwayo bubekwe kwisitya seglasi kunye nokugcinwa kwiqrijini.
I-Lipstick eyenziwa ekhaya iyanceda kakhulu emilonyeni. It has softening, moisturizing and nourishing properties. Ngoko ke, isiponji sakho siya kuhlala sikhululekile.
Ngokuqhelekileyo, i-shampoos iqulethe izinto ezikhokelela ekubunjweni kweenwele kunye nezinwele ezomileyo. Kwakhona rhoqo ama-shampoos enza iinwele zingathobeli kwaye zingenakususwa. Ukuze ugweme le ngxaki, yenza i-shampoo ngokwakho. I-shampoo enjalo ayiyikukusindisa kuphela kwi-dandruff, kodwa ihlambulule neenwele zakho.
Ukwenza i-shampoo, thabatha isine yeglasi yesepha yamanzi kunye nomlinganiselo ofanayo wamanzi amaminerali, yongeza enye i-tbsp i-apilite iviniga yeoli, isiqingatha sesipuni seoli yeoli, iifuni zeetapuni ezintathu ze-apple juice kunye ne-cloves encane yomhlaba. Hlanganisa zonke izithako kunye nomxube omncinci. I-shampoo ephumela ekubeni isetyenziswa, njengesiqhelo. Kodwa gcinani engqondweni ukuba i-shampoo eyenziwe ekhaya iya kugcinwa kungekho ngaphezu kweeyure ezingama-72, kwaye kuphela kwifriji.
Ulusu lobuso ludinga ukunakekelwa okhethekileyo, kuba lona lubuhlungu kakhulu kwaye lubucayi kwizinto zangaphandle. Ukuguga kusengaphambili, ukubola, ukubola kwesikhumba konke ukungabikho kwamavithamini. Kwakungekho nantyantyambo yeevenkile ezibuyisela ngokukhawuleza isikhumba. Kodwa kungenza ukhilimu owenziwe ekhaya.
I-recipe yale krimu ilula kakhulu. Thatha isipuni esisodwa sebhotela, esinye isipuni se-honey, esinye isipuni samakhowe omhlaba (iplamu, i-apula, iipare) kunye ne-yolk enye. Hlanganisa zonke izithako ukuba uhambelane ngokufanayo kwaye usebenzise ngokukhawuleza ubuso. Emva kwezihlandlo ezimbalwa usebenzisa i-krimu isikhumba sakho siya kuba ngcono: ama-wrinkles amahle aya kutshabalala, ubugcisa buya kuphucula.
Ukuba unengxaki yesikhumba, itiye elula ye-chamomile inempawu ezinqabileyo ezichasayo kunye neetoni. Yilungiselele ngokulula. Thatha ezimbini iipunipoon ze-chamomile izimbali kwaye uthele amanzi abilayo. Imveliso kufuneka ifakwe kwiiyure ezimbalwa, emva koko iya kuba ilungele ukusetshenziswa. Sula nje ubuso buhlambulule kwangaphambili nge-infusion.
Iimpoule izimonyo: ukubunjwa, ukusebenza, imithetho yesicelo
NgoNovemba onomlilo kwi-unicex ephosakeleyo evela kwiYSL noTom Ford
Iimveliso ezinonopheliso zokunyamekela kwehlobo
Iimidlalo zemidlalo ezinepaghetti
Ukukwazi kunye namadoda aseNtaliyane
I tattoo yesikhashana: ingozi ngenxa yobuhle
Unokukhetha njani indlela yokwenza ubuso obufanelekileyo?
Indlela yokwenza umatshini emva kwe-40: imithetho evela ku-Angelina Jolie
Inkukhu ethosiweyo eDominican
Uxinzelelo - ukugcinwa kancinci kwebisi kumama onesiko
Amaqanda aqhekezayo "Ukuqwalaselwa"
Ukutshata okwesibini kunye nomntwana
Yisiphi ukhilimu esifanelekileyo kwesikhumba esomileyo